Halikan kita - タガログ語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: halikan kita (タガログ語 - ビルマ語)
အလွန်သွေ့ခြောက်သော အရပ်တည်းဟူသော တော၌ပင် သင့်ကို ငါသိပြီ။ ကျက်စားရာအရပ်၌ ဝပြော စွာ စားရကြ၏။
အကျွန်ုပ်သည် မြေကြီးပေါ်မှာကိုယ်တော်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေပါပြီ။ အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်စရာဘို့ အကျွန်ုပ်အပ်ပေတော်မူသောအမှုကို အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ ပြီးပါပြီ။
လူဆိုးလက်မှ သင့်ကို ငါနှုတ်၍၊ ကြောက်မက် ဖွယ်သော သူတို့လက်မှ ရွေးယူမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
ငါသည်လည်း သင်၏ အရာကို နှုတ်မည်။ သင် ၏ နေရာမှ သင့်ကိုချမည်။
အကျွန်ုပ်ကို မစတော်မူသောကြောင့်၊ အတောင်တော် အရိပ်၌ ဝမ်းမြောက်ပါမည်။
ကိုယ်တော်ကိုမြော်လင့်လျက် နေပါသည်ဖြစ်၍၊ အပြစ်ကင်းခြင်းနှင့် သဘောဖြောင့်ခြင်းသည် အကျွန်ုပ်ကို စောင့်ရှောက်ပစေသော။
အိုယေရုရှလင်မြို့၊ သင့်ကို ငါမေ့လျှင် ငါ့လက်ျာ လက်သည် မိမိအတတ်ကိုမေ့ပါစေ။
Kung magkagayo'y ipahayag naman kita; na maililigtas ka ng iyong kanan.
သို့ပြုလျှင် သင်၏လက်ျာလက်ရုံးသည် သင့်ကို ကယ်တင်နိုင်သည်ဟု ငါဝန်ခံမည်။
ပြောစရာမရှိလျှင်၊ တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍ ငါ့စကားကို နားထောင်လော့။ ပညာကိုငါသွန်သင်ပါမည် ဟု မြွက်ဆို၏။
အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်း မဲ့ရှာပါ၏။ ပညတ်တော်လမ်းမှ လွဲစေတော်မမူပါနှင့်။
ငါသည်ယုဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတို့ လက်မှ သင့်ကိုကယ်လွှတ်၍၊
အကောင်းဆုံးသော ဆန်စပါးနှင့် ငါကျွေးမည်။ ကျောက်ထဲက ထွက်သောပျားရည်နှင့်လည်း ဝပြော စေမည်။
အကျွန်ုပ်သည် သိတင်းတော်ကို ညီအစ်ကိုတို့ အား ကြားပြောပါမည်။ ပရိသတ်အလယ်မှာ ကိုယ်တော် ကို ချီးမွမ်းပါမည်။
broma (スペイン語>ラテン語)hair clip (英語>タガログ語)nimitysoikeudella (フィンランド語>英語)18 adult hollywood movies watch online (イタリア語>英語)ad posteros (ラテン語>英語)sine labore nihil per ardua ad alta (ラテン語>イタリア語)tauti (フィンランド語>ルーマニア語)हम पतंग उड़ा रहे हैं (ヒンズー語>英語)tierra del sol (スペイン語>ラテン語)hindi kana sana nagpa asa (タガログ語>英語)aldilla de res (スペイン語>英語)plurimos annos, meus frater (ラテン語>英語)khech ki bimari (ヒンズー語>英語)death doctor (英語>ラテン語)ruas (マレー語>簡体字中国語)me shop pe hu (ヒンズー語>英語)i am happy (英語>タガログ語)merajuk in english (マレー語>英語)ex igni (ラテン語>英語)duty (英語>エスペラント語)tennem (ハンガリー語>英語)filtermateriaal (オランダ語>英語)qui nocet? (ラテン語>ドイツ語)nach alter Überlieferung gebraut (ドイツ語>イタリア語)flora bacteriana (スペイン語>英語)